Inkampani iphrofayela - Rmc Industrial Corporation Co., Ltd
RMC Industrial Corporation kuyinto professional emikhulu nomkhiqizi zonke izinhlobo amasondo steel namasondo aluminium ingxubevange, ukuhlanganisa ukuthuthukiswa kanye ukukhiqizwa ndawonye. Imikhiqizo yethu eziyinhloko zihlanganisa steel non beadlock amasondo, amasondo steel beadlock nokungezona beadlock aluminium ingxubevange amasondo beadlock aluminium ingxubevange amasondo kanye amathayi, futhi singahlinzeka izingxenye eziningi kanye izesekeli izimoto ezahlukene.
Inkampani yethu yasungulwa ngo-2008, ngaphambi kokuba inkampani esungulwe sesivele achitha iminyaka eminingi emlandweni e amasondo kanye amathayi umkhakha. Sise Ningbo City edude Shanghai, sijabulela amanzi elula, umhlaba kanye nomoya zokuthutha.
Abasebenzi bethu inkampani zonke abasha kakhulu futhi ngemizamo yonke abasebenzi bethu, RMC abantu ngokuqhubekayo bazama ukuthuthukisa izinga lomkhiqizo, futhi njalo bazama ukuthuthukisa inkampani yethu ukuphatha isimiso kanye umqondo zobuchwepheshe. ukukhiqizwa ikhono lethu yonyaka amasondo 2 million.
Okwamanje, RMC isivele zithunyelwa Melika, France, e-Australia, e-Italy nakwamanye amazwe 20 izifunda, kanye, RMC ukunikeza imibono yethu Ushintshe kumakhasimende ethu e-China. Inkampani yethu igxile njalo ucwaningo, ukuthuthukiswa kanye emisha, futhi ithuthukiswe double amasondo eziningi ezintsha beadlock okuyinto kakade kulo Mhlangano amakhasimende ethu imoto Nissan Y60, Tundra, Jeep, Raptor, Jimny, Prado nokunye, futhi ungathola kule moto zethu Igalari. Futhi imikhiqizo yethu elaklanywa siqu amaqembu design yethu, sisuke ngokuqhubekayo ukwenza design abaningi ukuhlangabezana amakhasimende 'kudinga.
RMC ngeke ukuqalisa esigabeni yamasu wethu ukuthuthukiswa yesibili. Inkampani yethu ngokuqondene "ngamanani ezifanele, esebenza kahle isikhathi ukukhiqizwa futhi emva-sales service ezinhle" njengoba wumgomo wethu. Sithemba ukuba ubambisane amakhasimende amaningi ekuthuthukiseni mutual kanye nezinzuzo. Samukela abathengi ezingaba ukuxhumana nathi.